Thwebula Waze 4.10.0.2 – Vessoft
Amamephu, Inethiwekhi Yokuxhumana
English (United States), Afrikaans, Français, Español...
Waze – itilosi social eklanyelwe ukuthola ulwazi lwamanje ngezenzakalo endleleni. Isofthiwe ikuvumela ukubuka ulwazi mayelana kwabantu traffic, izithiyo ehlukahlukene, speed kuvunyelwe, indawo iziteshi zamaphoyisa kanye nezinye izinguquko izimo emgwaqeni. Waze kwenza sokubhala amanothi mayelana izingxenye ezithile komgwaqo futhi nixoxe imininingwane nge abasebenzisi nabanye uma kunesidingo. Isofthiwe ngenhloko izindawo evamile noma imizila travel and ngokuzenzakalelayo ilungisa kubo kucatshangelwa izenzakalo zamanje emigwaqweni. Futhi Waze ikuvumela ukuba ukuxhuma akhawunti ethandwa zokuxhumana zenhlalo futhi ukushintshanisa ulwazi olufanele nabangani bakho.
Ukubheka ulwazi mayelana izenzakalo zamanje emigwaqweni
Izinguqulo Alternative emizileni
Ukuxhumana nezinye abasebenzisi
Ukuxoxa popular zokuxhumana nabantu
Amazwana on Waze:
Waze Ahlobene software:
English, Español, Deutsch, 中文... 9Apps 3.0.1.8